Munondo weDamocles: Nhoroondo uye Zvinoreva - UniProyecta
Iyi ngano yakagadzirwa naCicero, nyanzvi yekunyora nyanzvi mune zveRoma nguva.
Iyo nyaya inopfuura muumambo hweSirakuse, IV century BC.
Damocles aive anokudzwa muchengeti panguva yekutonga kwaDionysus I mudzvanyiriri.
Nhoroondo ndeyekuti maDamocles akaedza kuwana nyasha kubva kuna mambo nekumubata kumeso nekudzokorora, kunyangwe pasi pasi aimuitira godo nesimba rake uye hupfumi.
Kune vazhinji vaivenga muchivande Mambo Dionysus nekuda kwekuzivikanwa kwavo seanodzvinyirira uye ane hutsinye. Asi Damocles haana kuona kuti zvakaoma sei kuva pachinzvimbo chamambo, aingoona mari yake chete.
Saka rimwe zuva akamuudza.
Mambo wangu, unofara sei iwe! Ane zvese zvinoshuviwa nemurume… simba, mari, vakadzi.
Kune iyo mambo, atoneta nekurumbidzwa kwakanyanya, akapindura kuti kwezuva rimwe chete ivo vanogona kuchinja nzvimbo dzavo. Damocles pakupedzisira aigona kunakidzwa nehukuru hwese hwamambo, kana chete kwemaawa mashoma. Damocles akasvetuka nemufaro uye akafara kwazvo.
Mangwanani akatevera akasvika achifara pamuzinda, mumwe nemumwe wevaranda akakotama pamberi pake, aikwanisa kudya chikafu chinonaka kwazvo muumambo uye ainakirwa nevakadzi vakanaka vachimutamba. Raive rimwe remazuva akanakisa ehupenyu hwake, asi chimwe chinhu chakangoerekana chachinja paakasimudza musoro kumusoro. Pamusoro pemusoro wake aive akarembera bakatwa hombe uye rakapinza, rakamiswa kubva pamaneya emabhiza iyo chero nguva inogona kudonha ikonzere nhamo.
Yaive panguva iyoyo chaiyo iyo Damocles aigona kutoramba achifadzwa nemufaro wese wekuva mambo, chero kwezuva rimwe chete nenzira imwecheteyo. Dionysus akaziva kuti akange aona pfumo rakarembera ndokuti: MaDamocles, unonetsekerei nebakatwa? Iniwo ndinosangana nenjodzi dzakawanda zuva nezuva dzinogona kundiita kuti ndinyangarika.
Damocles haana kuda kuenderera nekuchinja kwenzvimbo uye akaudza Diniosio kuti aifanira kuenda.
Panguva ino chaiyo maDamocles aigona kuona kuti simba rakawanda uye hupfumi hwaive nechikamu chakashata, zvekuti musoro wake waigona kudimburwa nebakatwa chero nguva. Nekudaro haana kuda kuzove pachigaro chamambo zvekare.
Ngatisatongere vamwe, hatizive kwavari. Zvichida kubva kunze zvinoita sekunge vari nani kupfuura isu asi isu hatizive huremu hwavanogona kutakura.
Simba kana hupfumi hazvingaite kuti ufare uye kana zvikazviita zvichave zvechinguva. Zvese ndezvenguva pfupi, kunyangwe hupenyu.
kudzidziswa » tsika nemagariro » Ngano dzechiGiriki » Munondo weDhamocles